"Macaamiisha Koowaad" Waa inuu noqdaa Mantra | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 2, 2017 Jimco, Oktoobar 6, 2017 Dan Purvis
Qaadashada awoodda tikniyoolajiyadaha suuqgeynta badan ee la heli karo waa tallaabo wanaagsan oo ganacsi, laakiin waa haddii aad maskaxda ku hayso macaamiishaada. Kobaca ganacsigu wuxuu ku tiirsan yahay tikniyoolajiyadda, tani waa xaqiiqo aan muran ka taagnayn, laakiin ka muhiimsan qalab kasta ama qayb ka mid ah softiweerku waa dadka aad wax u iibinayso.
Inaad barato macmiilkaaga marka aysan ahayn qof fool-ka-fool dhib kuma keeneyso, laakiin mugga ballaaran ee xogta ee lagu ciyaarayo macnahiisu waa inay suuq-yaqaanno xariif ah ka heli karaan sawir ka ballaaran sidii hore. Raadinta qiyaasaha saxda ah iyo fulinta saxda ah falanqaynta warbaahinta bulshada ayaa sameysa aqoonsashada macaamiisha dhabta ah ka fudud sidii hore waxayna kaa caawineysaa inaad sare u qaaddo fahamkaaga guud ee macaamiishaada.
Sidee Waxyaabaha laga Filayo iyo Adeeggu Isku Beddelay
Macaamiisha ayaa si aad ah ugu xeel dheer sida ay u heli karaan sumadaha, gaar ahaan kobaca warbaahinta bulshada. Hadana, taa macnaheedu waxa weeye in filashooyinkoodu noqdeen kuwo aad u baahi badan. Baahidaan waa inaanay si xun u arkin calaamadaha maaddaama ay tahay fursad dheeri ah oo lagu bixiyo adeeg macmiil iyo waaya aragnimo weyn, laguna muujiyo tayada shirkadooda.
Adeegga macaamiisha-waqtiga dhabta ah wuxuu noqday mid caadi ah, oo leh hal sahan oo soo jeedinaya in 32% macaamiisha ay filayaan jawaab 30 sanadood gudahood, 10% dheeraad ahna ay filayaan wax 60 daqiiqo gudahood ah, ha ahaato "saacadaha xafiiska" ama habeenka ama sabtiyada iyo axadaha.
Kala duwanaanta aaladaha casriga ah ee loogu talagalay in lagu ururiyo loona falanqeeyo xogta ayaa si weyn u caawisay sidoo kale, iyadoo la adeegsanayo gorfaynta websaydhka oo ay weheliso la socoshada kaqeybgalka bulshada, keydka macluumaadka CRM, iyo tirakoobka laxiriira soo dejinta ama lambarrada diiwaangelinta. Mugga badan ee noocyada xogta kaladuwan waxay u oggolaaneysaa saxnaanta tilmaamidda macaamiisha bartilmaameedka iyo qaabeynta ololeyaashaada si waafaqsan.
Tani waa wax badan oo la maareyn karo oo kor lagu sii hayn karo, waana la fahmi karaa in summaddu ay ku dhibtoon karto inay wax walba u habeyso. Tani waa sababta maalgashiga tikniyoolajiyada saxda ah runtii muhiim u tahay iyo sababta looga faa'iideysanayo aaladaha sirdoonka bulshada iyo softiweerka dibedda ka jira. Si looga caawiyo fududeynta maareynta xogtaada si ay uga faa'iideystaan ​​macaamiishaada waxyaabaha soo socda waa inay noqdaan tixgelinno asaasi ah.
Ogaanshaha waxa tartamayaashu sameynayaan waxay udub dhexaad u tahay helitaanka xuquuqda iyo khaladaadka ka dhex jira meheraddaada. Waad ku qori kartaa tartamayaashaada adoo si fudud u raacaya guulahooda iyo guuldarrooyinkooda isla markaana ku dhaji waxyaabaha aad jeceshahay iyo waxyaabaha ay neceb yihiin xubnaha dhagaystayaasha iskutallaabta.
Raadinta tartameyaasha iyo qiimeynta waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka hesho booskaaga meheraddaada oo aad ka shaqeyso sidii loo horumarin lahaa meeshii loo baahdo. Waxaad ku falanqeyn kartaa isla nooc ka mid ah nashaadaadyada bulshada ee tartamayaasha sida aad adigu sameyso, adoo isku dheelitiraya cabirrada aan micnaha lahayn ee ka dhanka ah xogta la taaban karo ee aad soo xaroon karto.
Bartilmaameedka Dhageystayaasha Bartilmaameedka
Macluumaad badan oo ku saabsan dhagaystayaashayada la heli karo, cudurdaar ma leh in aan la shakhsiyeeyo waxyaabaha la soo bandhigayo isla markaana la soo bandhigo khibradaha macaamiisha ee gaarka ah. Tusaalahan dharka iyo astaamaha alaabta guryaha ee Next waxaa suurtagal ah in la arko sida fahamka danaha macaamiishooda ayaa ka caawin kara iyaga qorsheynta ololeyaasha mustaqbalka.
Xogtaani waxay umuuqataa mid iska caadi ah laakiin waa wax uun laakiin. Si dhow u fiirinta xogta Sotrender, waxay muujineysaa Xiga sida saxda ah ee loo qaadayo ololahooda mustaqbalka iyo mowduucyada laga yaabo inay ku mashquuliyaan dhagaystayaashooda si wax ku ool ah. Haysashada macluumaadkani waxay muhiim u tahay qorsheynta ololeyaasha mustaqbalka iyo gacan ka geysashada hubinta inay ugu fiican yihiin heerarka hawlgelinta sare.
Maxay macaamiishaadu rabaan? Waxaa laga yaabaa inaad taqaanid waxaad rabto inaad horumariso laakiin waa waxa dadku rabaan? Xitaa jawaab celinta aan lagaraneynin ee loo maro warbaahinta bulshada ayaa si wanaagsan loogu isticmaali karaa horumarinta wax soo saarka waxaadna dooran kartaa inaad talaabo horey usii qaado oo aad macaamiishaada kaqeyb qaadatid horumarinta wax soo saarkaaga.
Coca Cola ayaa tan ku sameysay iyaga Nooca VitaminWater sida ay la shaqeeyay taageerayaashooda Facebook si loo helo qof ka caawiya horumarinta dhadhan cusub. Ku guuleystaha waxaa la siiyay $ 5,000 si uu ula shaqeeyo kooxda horumarinta si loo abuuro dhadhanka cusub waxayna keentay heerar waxqabad weyn oo leh in ka badan 2 milyan oo taageerayaasha VitaminWater Facebook ah oo ku lug leh geeddi-socodka horumarinta wax soo saarka.
Aqoonsiga Saameynta iyo Bartilmaameedka
Qeyb kasta gudaheeda waxaa hadda jira saameyn muhiim ah oo qadarin iyo fiiro gaar ah u leh bulshada dhexdeeda. Noocyadu waxay u dagaallamaan inay ku xirnaadaan saamileyaashan, iyagoo waqti badan ku bixinaya iyo xitaa maalgashi dhaqaale si ay ugu qanciyaan kuwa wax saameynaya inay horumariyaan una doodaan wax soo saarkooda.
Iyada oo saamileyda makro iyo micro ay ku jiraan baahi weyn, ganacsigaagu wuxuu u baahan yahay inuu helo kuwa u doodi kara ganacsigaaga oo aad ugu dhow macaamiisha aad bartilmaameedsato. Markaad 'mantarka ugu horeysa' mantra waa inaad raadisaa saamileyaal micno u leh dhagaystayaashaada waxayna noqon kartaa wax kudarsada dadaalkaaga suuq-geynta, halkii aad kaheli lahayd "qof" magac leh oo leh tiro raac raacsan. Aqoonsiga saamileyaasha saxda ah ee astaantaada ayaa runtii muhiim u ah guusha farshaxanka khiyaanada leh suuqgeynta suuqgeynta.
Waxaad dooneysaa inaad u dhigto astaantaada mid macaamiisha ay ku faanaan inay u doodaan, laakiin si aad u gaarto u doodid waa inaad si buuxda diiradda u saartaa macaamiisha. Way fududahay inaad ku xirnaato tiknoolajiyada oo aad iska ilowdo wajiga aadanaha ee dadaalka suuqgeyntaada. Teknolojiyaddu waxay u taagan tahay inay ka caawiso oo ka caawiso gudbinta khibradaha macaamiisha ugu wanaagsan.
Tags: qiimeyntafalanqaynta tartamayaashamacmiil marka horeFacebookbartilmaameedka dhagaystayaasha
Dan Purvis oo ay kujiraan Brand Republic oo ah mid kamid ah Top 50 UK Suuqgeynta iyo Saameeyayaasha Warbaahinta Bulshada, wuxuu jecelyahay in lakeeno waxyaabaha, suuq geynta iyo iibka si wadajir ah loogu xiro ganacsiyada dadka dhagaystayaasha ah, si loogeeyo qiimaha ganacsi ee lataaban karo iyo ROI.
Xayeysiinta Barnaamijku miyay iibsanayaan sumcaddaada?